Usoro nkuzi - Reof
Mepụta ụdị BIM maka ọkpọkọ ọkpọkọ Ihe ị ga-amụta Na-arụkọ ọrụ ọnụ na ọtụtụ ọrụ ịdọ aka ná ntị metụtara ọrụ pipeline Ihe atụ ụdị ihe eji arụ ọrụ sistemụ pọmpụ ghọtara usoro ezi uche dị na sistemụ na Revit Jiri akwụkwọ ntuziaka na ngwa ọrụ akpaka na ọkpọkọ rụọ ...
Usoro - BIM MEP Usoro nkuzi
Revit MEP Course - HVAC Mechanical nrụnye
N'ime usoro a, anyị ga-elekwasị anya na ojiji nke ngwaọrụ Revit nke na-enyere anyị aka na-eduzi nyocha ike nke ụlọ. Anyị ga-ahụ otu esi abanye ozi ike na ihe nlereanya anyị yana otu esi ebupụ ozi a maka ọgwụgwọ na mpụga nke Revit. N'akụkụ ikpeazụ, anyị ga-eleba anya na ịmepụta usoro ezi uche ...
Usoro AulaGEO a na-akuzi iji Revit wee tụlee, chepụta ma gbakọọ sistemụ eletriki. Ga-amụta ịrụ ọrụ na mmekorita ya na ọzụzụ ndị ọzọ metụtara ịhazi na iwu ụlọ. N'oge mmepe nke usoro a, anyị ga-a attentiona ntị na nhazi dị mkpa n'ime ọrụ Revit iji nwee ike mezuo ...
N'ime usoro a, anyị ga-elekwasị anya na iwepụta ọnụọgụ ozugbo na ụdị BIM anyị. Anyị ga-atụle ụzọ dị iche iche iji wepu ọnụọgụ site na iji Revit na Naviswork. Mwepụta nke ọnụọgụ ọnụọgụ bụ ọrụ dị oke mkpa nke agwakọtara n'ọtụtụ ọkwa nke ọrụ ahụ ma rụọ ọrụ dị mkpa na akụkụ BIM niile. N'oge nkuzi a ị ga-amụta ...
Usoro - BIM Ọrụ Usoro NavisWorks Usoro nkuzi
Usoro Hydrosanitary na-eji Revit MEP
Mụta iji REVIT MEP maka nhazi nke Sanitary Installations. Nabata na usoro a na Sanitary Installation with Revit MEP. Uru: will ga-achịkwa site na interface na ịmepụta atụmatụ. Ga-amụta ihe a na-ahụkarị, ezigbo ụlọ obibi nke 4. Aga m eduzi gị site na nkwụsị, agaghị m eche na ị maara ihe ọ bụla gbasara Revit ma ọ bụ Sanitaria. ...
BIM Computational Design Nke a bu nkuzi bu enyi na enyi ntuziaka na uwa nke ime komputa site na iji Dynamo, uzo mmeghe ihe nlere maka ndi mmebe. A na - emepụta ihe na - aga n'ihu site na ọrụ nke a ga - amụta isi echiche nke mmemme mmemme. N'ime isiokwu anyị ga-arụ ọrụ na geometries ...
Usoro - BIM Ọrụ Usoro mmemme Usoro nkuzi
Revit MEP Agụmakwụkwọ (Mechanics, Electrical and Plumbing)
Were, weghachite ma debe oru gi sistemụ na Revit MEP. Tinye ubi nke imewe na BIM (Buildingmepụta Ihe Nlereanya Ozi Masterlọ) Master ịbịaru ngwaọrụ dị ike Hazie ọkpọ nke gị Akpaghị aka gbakọọ dayameta Mee mepụta igwe ikuku kpụpụta Mepụta na dọkụmentị netwọkụ eletriki gị Na-ewepụta akụkọ bara uru na nke ọkachamara Wepu ...
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Revit iji mepụta ọrụ maka ụlọ N'ime usoro a, anyị ga-elekwasị anya n'inye gị usoro ọrụ kachasị mma ka ị nwee ike ịmụta ngwaọrụ Revit maka ụdị ụlọ na ọkwa ọkachamara na obere oge. Anyị ga-eji asụsụ dị mfe nghọta dị mfe iji ...
Autodesk Revit N'ezie - dị mfe
Dị ka ọ dị mfe dị ka ikiri onye ọkachamara ịzụlite ụlọ - akọwapụtara nzọụkwụ site na nzọụkwụ Mụta AutoDesk Revit ụzọ dị mfe. N'ime usoro a, ị ga-amụta echiche Revit site na nkwụsị ka ị na-emepe ụlọ; Nrụ ọrụ na-arụ ọrụ na atụmatụ na mbuli elu, Ntọala, mgbidi na mbadamba mezzanine, Ọnụ ụzọ na windo, ụlọ, ọnụ ọgụgụ, nkọwa ...
Usoro ihe owuwu ụlọ (Revit Structure + Robot + ihe siri ike na ihe nchara dị elu)
Mụọ otu esi eji Revit, Robot Structural Analysis, na Advance Steel maka imepụta ụlọ nke ụlọ. Detuo, chepụta ma dee akwụkwọ ọrụ ihe owuwu gị na REVIT Tinye ubi nke imewe na BIM (Buildinglọ Nleba Ozi Mgbasa Ozi) Nna-ukwu dị ike ịbịaru ngwaọrụ Mepụta ndebiri nke gị Mbupụ na mmemme nghazi Mepụta na dọkụmentị ...